Han Jin toro na Germany, ya na ezinaụlọ gburugburu ụwa. Taa, obibi obibi ya dị na California, na isoro ezinụlọ ya kerịta ndụ ya na ahụmịhe ya abụrụla ihe ọ rọrọ nrọ kemgbe ọ bụ nwata. Ọbụlagodi site na ọtụtụ puku kilomita site iche, ọ nweghị ụzọ ọ ga-esi jikọta na ahụmịhe ha? Ajụjụ a kpaliri mmepe nke LucidPix.
Dika okpokoro dijitalụ ewepụla, Jin maara ụzọ ndị ọzọ ị ga-esi soro ndị ị hụrụ n'anya na-emekọrịta ihe nke ọma. Lucid malitere site na igwefoto 3D. Ọ bụ ihe injinịa mara mma, mana Han chọpụtara ngwa ngwa na ọtụtụ ndị achọghị ịnwe oge iji ngwaọrụ dị iche na ekwentị ha mepụta foto na vidiyo 3D. Ebumnuche ahụ abatala n'ime ahụmịhe 3D dị omimi, dabere kpam kpam na ama nke ị nwere. LucidPix ahụ ọfụma na-egosi site na enyo gị, na-eme ka ị nwee mmetụta dị ka ị nwere ike ịbanye n'ime foto ndị ahụ ma soro ndị ezinụlọ na ndị enyi nọ ebe ahụ. Nke a bụ ebumnuche nke LucidPix… ndị ọrụ nwere ike ịnwe ma mekọrịta ihe ndị ha hụrụ n'anya na-enwe ma na-enwe mmetụta. N'ihi nke a, LucidPix na - akpogharị foto eserese nke 2D ma dị elu ma mepe ụwa ọhụrụ nke ederede na mmetụta.
Site na eziokwu a, echiche Jin nke inwe obi iru ala na ezinụlọ ya emezuola. Ngwa ahụ ga-ebido n’ihe ọrụ na ihe karịrị otu nde ndị ọrụ-niile nwere ike isoro ibe, ezinụlọ, na ndị enyi nwekọrịta. Site na ntụrụndụ nke anụ ọhịa ruo n'oge dị jụụ, foto nke LucidPix na-enyere aka ịmepụta oke okwu n'ime ụwa nke chọrọ mmekọrịta.
LucidPix dị ugbu a iji budata gam akporo na iPhone na Play and iOS app store na akwụghị ụgwọ. Ngwa ahụ na-enye mkparịta ụka foto 3D na-akparaghị ókè na ndezi, nnweta LucidPix pụrụ iche, yana ịkekọrịta ọtụtụ mgbasa ozi na nyiwe ozi, na nkwalite ngwa-ngwa na-emepe ọtụtụ atụmatụ dị elu maka ọnụ ala dị ala kwa ọnwa ma ọ bụ kwa afọ.
Etu ị ga-esi nweta 100K ọnwa kwa ụbọchị na Pinterest na otu ọnwa →← Etu esi etinye ma wepu 3D Frame